Okuzenzakalelayo iqanda nokupakisha umshini Factory | I-china Abakhiqizi Bomshini Wokupakisha Amaqanda Okuzenzakalelayo
Okuzenzakalelayo iqanda nokupakisha umshini
Amaqanda wokugaya nokupakisha umshini
Umshini wokugaya amaqanda
Umshini wokuwasha amaqanda
Umshini wokuxebula amaqanda
Umshini wokuphula amaqanda
Ukuqandusela umshini wokupakisha amaqanda
Ukuchamusela iqanda lokufaka nokufaka umshini wokuqandusela iqanda, kungabamba okuzenzakalelayo bese kupakisha ngomshini owodwa.
Umshini we-egg packer
Ngokusebenzisa yonke ikholomu ekuthuthweni kwekhanda losayizi wamaqanda ukulungisa, ukuqinisekisa ikhanda leqanda lihlanganiswe phezulu, ukuqinisekisa ukuvuselelwa kwesitoreji samaqanda.
Umshini wokupakisha amaqanda
Umshini wokupakisha weqanda we-Mintai usetshenziswa kabanzi emapulazini enkukhu (noma edada) nasezitshalweni zokucubungula amaqanda. Nciphisa izindleko zabasebenzi. Yenzelwe izici ezilula, ezinokwethenjelwa, eziguquguqukayo futhi ezinamandla, okulula ukuyisebenzisa nokugcina.
a) Lo mshini ungaxhuma namaqanda phakathi kweqoqo lohlelo noma umugqa wokukhiqiza amaqanda wokuhlanza; b) Ukulinganisa ngesisindo seqanda bese upakisha ngokuzenzakalela, ngenkathi kulungiswa inqwaba phezulu, kuhle ukugcina amaqanda; c) Ifanele 6 * 5 = 30 amathreyi wamaphepha noma amathreyi epulasitiki; d) ungakhetha ukuthumela okuzenzakalelayo noma ukuthunyelwa ngesandla;
NO.861 IPANYU ROAD, FUWANYUAN, JINSHAN INDUSTRY, DISTICT, FUZHOU
Ifekisi:+86 (0) 591 87640881
Iqanda Ukuhlela Futhi Ukupakisha Machine, Ukuchamisela Iqanda Packer, Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda, Egg Ukupakisha Machine, Umshini Wokubhoboza Iqanda Elibilisiwe,